Homeसमाचारकठैभरा ! १ महिनाको सुत्केरी चिउरा खादै बन्द कोठामा, यस्तो कसैलाई नपरोस (भिडियो सहित)
April 19, 2020 Spnews समाचार Comments Off on कठैभरा ! १ महिनाको सुत्केरी चिउरा खादै बन्द कोठामा, यस्तो कसैलाई नपरोस (भिडियो सहित)
सुत्केरी श्रीमती र बच्चा को बिजोग टुलुटुलु हेरेर बसेको श्रीमान बताउछन् । उनीहरुको कोठामा केहि खाने कुरा नभएपछी मिडियाकर्मीले उनीहरुलाई केहि राहत मिलोस भनि एक बोरा चामल र नुन तेल किनी दिएका छन् तर उनको कोठामा ग्यास चुलो भए पनि ग्यास सकिएको रहेछ ।
ग्यास तिर हेर्दै श्रीमानले खाने कुरा त पायो अब ग्यास कसरि ल्याउने भन्दै सबै जना स्तब्ध भएका थिए । बाकि तलको भिडियोमा हेर्नु होला ।
कठैभरा ! १ महिनाको सुत्केरी चिउरा खादै बन्द कोठामा
यस्तो कसैलाई नपरोस (भिडियो सहित)